SAFFRON PEOPLE'S MOVEMENT: အင်တာနက် မိစ္ဆာစာရများ
Wednesday, 06 May 2009 18:36 ရန်ကုန်သားတာတေ
ဖိုးရှုပ်။ ။ ကျနော်လည်း တနေ့တနေ့ အုပ်စုလိုက် အီးမေးလ်တွေ တက်တက်ကြည့်ပြီး တော်တော်ကို ဆဲတတ်လာပြီ ဦးရုက္ခစိုးရ။ ဗမာလိုတောင် မဆဲတော့ဘူး။ ဘိုလိုပဲ ဆဲတော့တယ် …။ အဆင့်မြင့်လာတဲ့ သဘောပေါ့ ..။ S #$@!^&*&^%….။ ကမ္ဘာမှာ ဗမာကွ .. အသားကုန် ဆဲပြလိုက်မယ် .. (ပြောရင်းက လက်ခမောင်းထခတ်သည်)
M …@#%^ F …^%$& Go to hell …*&^%s@!
ဖိုးရှုပ်။ ။ အရင်က ရဲနီ (ဧရာဝတီက သတင်းအယ်ဒီတာ မဟုတ်ပါ) %^4$#*& ရုက္ခစိုးကြီးက အခုတော့ $#%^ ဝီစကီလေး တမြမြနဲ့ *&^^%*(&$#@ မော်လဒိုက်ကို သွားလိုက်၊ ကာရာအိုကေ ဆိုလိုက်၊ အပျိုမ လေးတွေကို မထိတထိ ပြောလိုက်နဲ့ … ဘဝမေ့နေပြီ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း .. %$#^$@@!$$%**^& တို့ သိရအောင် ကြော်ငြာမောင်း ခတ်လိုက်ရပါ ကြောင်း …၊ ဆဲချင်လွန်း၍ ဆဲခြင်း မဟုတ်ကြောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေး Right တခု အနေနှင့် မဖြစ်မနေ ဆဲရခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ..။ ပုံ .. ရုက္ခစိုးလေး၏ ဆဲရေးဆိုခွင့်ရှိသူ။
ရုက္ခစိုး။ ။ ငါလခွမ်းမှပဲ ပေါက်ကရတွေ လျှောက်ရေးထားတယ်။ ငါ .. $#%^&%$#^&@! .. အဲ့ဒီ သောက်ကောင်ကို မေးလ် ပြန်ပို့စမ်း .. ခုပို့ .. ဖိုးရှုပ် ..။ လုပ်စမ်းပါကွာ .. ကြာတယ် .. ငါ့ဘာသာပို့မယ် (ပြောပြောဆိုဆို ဖိုးရှုပ်ကို အတင်းတွန်းချပြီး ကွန်ပျူတာရှေ့တွင် ဝင်ထိုင်လိုက်သည်)